Gufgaf|Online कण्डमको फाइदा
गफगाफ - कण्डम के ले बनेको हुन्छ ? यसको प्रयोग हुने तरल पदार्थ के हो ?
पुरुष कण्डम एक किसिमको ल्याटेक्स रबरले बनेको हुन्छ । यसमा प्रयोग हुने तरल पदार्थ लुब्रिकेन्ट हो । योनी सुख्खा हुने समस्या भएमा कण्डमको (लुब्रिकेन्ट) चिप्लो पदार्थले यौनक्रियामा सहजता ल्याउँछ र कण्डमलाई फुट्न बाट जोगाउँछ । साथै, यौन क्रियाकलापलाई सजिलो बनाइदिन्छ ।
स्त्री कण्डम कसरी प्रयोग गर्ने ?
स्त्री कण्डमलाई यौन सम्पर्क गर्नुभन्दा ८ घण्टा अघि नै लगाउन सकिन्छ । कण्डममा भएको दुईवटा रिङ्गहरु मध्ये एउटालाई योनीभित्र घुसारिन्छ जबकी अर्को रिङ्गलाई योनी बाहिर नै छोडिन्छ । स्त्री कण्डमलाई यौन सम्पर्कपछि तुरुन्त झिक्नुपर्दछ र त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । पुरुष र स्त्री दुवै कण्डमलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्दैन । प्रयोगकर्ताले कण्डमको प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारे जानकारी लिनुपर्छ । सकभर कण्डम किन्दा उच्च स्तरको खरिद गर्नुपर्दछ र कण्डमको प्रयोग गर्न नमिल्ने मिति (भहउष्चथ मबतभ) को जाँच गर्नुपर्दछ ।
कण्डम लगाएर यौन सम्पर्क गर्नु र नलगाएर गर्नुमा के फरक हुन्छ ?
कण्डम लगाएर यौन सम्पर्क गर्नाले अनिच्छित गर्भधारण तथा यौन रोग तथा संक्रमणहरु र एच. आई. भी संक्रमणबाट पनि बचाउँछ । तर, त्यसका लागि नियमित रुपमा प्रत्येक पल्टको यौन सम्पर्कमा नयाँ कण्डम सहि तरिकाले प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा गर्भधारण हुने र यौन रोग तथा संक्रमणहरु र एच. आई. भी संक्रमण हुने प्रवल सम्भावना रहन्छ । साथै, कण्डमको प्रयोग नगरेमा अनिच्छित गर्भ र यौन संक्रमणको डर भइरहन्छ र एक किसिमको मानसिक चिन्ता भइरहन्छ साथै पूर्ण रुपले यौन सन्तुष्टि नमिल्न सक्दछ ।
कण्डम किन फुट्छ ?
कण्डम सहि तरिकाले प्रयोग भएन भने फुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ । प्रयोग गर्ने मिति सकिएको र बिग्रिसकेको कण्डम छ भनेपछि फुट्ने गर्दछ । त्यसैले कण्डम प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि मिति, अवस्थाको जाँच गर्ने र लेखिएको निर्देशनलाई राम्रोसँग पालना गर्नुपर्दछ ।
महिला कण्डम किन सजिलै र सस्तोमा पाइंदैन ?
महिला कण्डम एक किसिमको रबरले बनेको हुन्छ । यसलाई बनाउँदा उत्पादन शुल्क बढि लाग्ने गर्छ । त्यसैले महिला कण्डम थोरै महँगो हुन्छ । यसको प्रयोग पनि पुरुष कण्डमको तुलनामा अलि असहज रहेको छ । यी विविध कारणहरुले गर्दा महिला कण्डम सजिलै र सस्तोमा पाईंदैन । साथै, प्रजनन्मा पुरुषको भूमिका पनि अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि पुरुषहरुले प्रयोग गर्न सक्ने अस्थायी साधनमा कण्डम मात्र उपलब्ध छ ।